Nzaghachi nke ndị ahịa
1325 Igwe eji egbutu Laser
1325 igwe ihe osise osisi
1530 CNC ụzọ ịkpụ igwe
Igwe nrịbama eriri
Ngwa nke igwe ihe osise laser na ụlọ ọrụ dị ọtụtụ karịa ka anyị chere?
Nka nka nke ihe osise Laser na-ezo aka n'iji ike dị elu nke ogwe ọkụ laser a na-atụ anya n'elu ihe ahụ, nke mere na elu ihe ahụ nwere ike gbanwee n'ụzọ anụ ahụ na nke chemically, ka e wee nweta ụkpụrụ a na-ahụ anya nke ihe osise aka. 1 laser osise nka dị ka m ...
The kasị n'ọtụtụ ebe eji laser ọnwụ igwe! Anyị na-enweta ndị ahịa ogologo oge ntụkwasị obi na imekọ ihe ọnụ!
Igwe laser Co2 bụ nke a na-ejikarị n'ahịa ugbu a na ire ụlọ ọrụ nke ụdị ngwá ọrụ, teknụzụ SYa CNC na-esochi ụzọ nke mmepụta nke ịkpụ akụrụngwa maka mmepụta ụlọ ọrụ - CO2 laser ọnwụ igwe, ịcha obosara site na 600 * 400. -200...
SYa CNC laser ọnwụ igwe, Gịnị mere na-ejigide elu ahịa?
SYa-1390 Co2 laser ọnwụ igwe Igwe a bụ echekwa CO2 laser ọnwụ igwe, kwadebere na pụrụ iche igwe mkpuchi mkpuchi, ọ bụghị nanị iji hụ na nchekwa nke onye ọrụ, na-eme ka dum nhazi mmepụta ihe ọzọ gburugburu ebe obibi nchebe, na mgbakwunye, mkpuchi mkpuchi. ...
Ị chere na eriri laser ọnwụ igwe nwere ike nke nta nke nta dochie CO2 laser ọnwụ igwe?
Ngwa nke teknụzụ laser na igwe dị ogologo oge, teknụzụ laser na-emetụta ụlọ ọrụ nhazi anyị, mmepe nke teknụzụ na nnọchi nke teknụzụ ochie na teknụzụ ọhụrụ iji jiri nwayọọ nwayọọ tozuo ngwa ngwa ngwa anya, ma mara ugbu a dị ka nhazi laser dị oke mkpa. ..
SYa CNC igwe ihe osise, echere m na ị ga-enwe mmasị!
Teknụzụ igwe ihe osise SYa CNC ， N'ime igwe njikwa ọnụọgụ ọnụọgụ, spindle eletrik na-anabata usoro nhazi ọsọ ọsọ ugboro ugboro. Enwere ụzọ njikwa atọ bụ isi: draịvụ na njikwa ntugharị ugboro ugboro, njikwa vector na njikwa na njikwa torque ozugbo. ...
Ị maara na igwe na-egbutu eriri anya na-achọkwa nlekọta n'oge eji?
Fiber laser ọnwụ igwe na-ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ eji mpempe akwụkwọ nhazi, ụgbọ elu, aerospace, electronics, eletriki ngwa, tube oyiyi akwa, ụgbọ ala, nri ígwè, textile ígwè, engineering ígwè, nkenke akụkụ, ụgbọ mmiri, metallurgy akụrụngwa, elevators, househo ...
Kedu sistemu igwe osise ị na-ejikarị?
A na-ekewa usoro ihe osise n'ime ụzọ atọ Shandong Shenya CNC akụrụngwa Co., Ltd. dabere na mkpa ndị ahịa iji hazie usoro kachasị mma 1, usoro ọkwọ ụgbọ ala + nzọụkwụ moto Stepper bụ sistemụ ịnya ụgbọ ala kachasị eji na ahịa ugbu a, nke kacha ewu ewu bụ atọ-pha...
SY- Laser Cutting Machine - Kedu ihe enwere ike ịmepụta?
Ojiji nke CO2 laser ọnwụ igwe bụ nnọọ obosara, otú i nwere ike kpamkpam kere. SY laser ọnwụ igwe nwere ike izute a dịgasị iche iche nke mkpa nke ndị na-eme, amateurs na azụmahịa rụọ ọrụ, gụnyere mfe igwe echiche imewe, nkwakọ ihe na MEDALS na trophies, n'ihi na ...
Kedu igwe fiber optic kachasị ọnụ nke ị zụrụ?
Shandong Shenya CNC Equipment Co., LTD., Anyị eriri laser ọnwụ igwe elu nhazi ala price (1) High nkenke, ngwa ngwa ọsọ, warara slit, kacha nta okpomọkụ emetụta mpaghara, ezigbo ọnwụ elu na-enweghị burr. (2) isi ọnwụ laser agaghị ejikọta na elu nke ihe, ọ bụghị ọkọ ...
Nke a ọ bụ cutter laser ị na-achọ?Nzụta ndị ahịa ọtụtụ oge !!!
Ihe ndị bụ isi .SY-LASER- X, Y ọrụ dị iche iche: 1300mm * 2500mm Ịcha lens na-elekwasị anya: F = 80mm ike mmepụta laser kacha elu: 500W Gbanwee ugboro nke ụdi ọkpọ: $ 300Hz Ike usu obosara: 0.5ms-2ms Laser: okpukpu abụọ. - oriọna ọla-edo - plated itinye uche oghere Ịcha interface ụgbọ ala ...
Ihe ị na-amaghị gbasara ndị na-egbu mma na-ama jijiji?
Deep CNC na-elekwasị anya na nyocha, ma wepụ ya na igwe na-egbutu mma vibration, na-agbanwe agbanwe ụfọdụ ngwaahịa usoro, dị ka katọn, plastik, akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ. Vibration cutter dị ugbu a na usoro ịkpụ ihe na-agbanwe agbanwe na ngwa nhazi, nke a na-ejikarị na hi ...
Onye mmekọ ntụkwasị obi-Onye nrụpụta sitere na Jinan, mpaghara Shandong
Shandong Shenya CNC Equipment Co., Ltd bụ ọkachamara na-emepụta akụrụngwa nke ị nwere ike ịtụkwasị obi, ọ ga-abụkwa onye gị na ya nwere ntụkwasị obi. Main ngwaahịa: l Cnc ihe osise igwe l Woodworking ihe osise igwe l Optical fiber ọnwụ igwe l Optical eriri akara igwe l Laser osise ma ...
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shandong Shenya CNC Equipment Co., Ltd.